म्यानचेस्टर जलिबढो 20210101300 फुटबल इ Englan ्गल इ England ्गल इ England ्ग्रेजी इ Engluld ्ग्रेजी इ Engluld ्ग्रेजी इ Engh ्गल्याण्ड 1th टूर अंग्रेजी फुटबल खेल लीटा। तिमी.त्य
घोषणा म्यानचेस्टर युनाइटेस्टर युनाइटेस्टर युनाइटेमल, इ England ्ल्यान्ड मैनालशिप
अघिल्लो खेलहरूको इतिहास
ओएल गननर शिपररले पत्रकारबाट पत्रकारबाट पत्रकारहरूबाट प्रश्नहरूको उत्तर दिएमा प्रश्नहरूले एस्टसँगै भिल्ला पार्कमा समग्र भिल्लामा समर्पित सम्मेलन गरे।
मलाई लाग्छ कि उनीहरूले क्वारेन्टाइन पछि देखाईएको छ, जुन स्तरमा रहन सक्छ। उनीहरूसँग धेरै कठिन खेलहरू थिए। यो देख्न सकिन्छ कि तिनीहरूले आफ्नो आकारमा काम गरे, र तिनीहरूको काउन्टरटटक्स लिगमा सबैभन्दा खतरनाक मध्ये एक हो। यो एकदम छिटो टीम हो, र हामी उनीहरूको मापदण्डको लागि तयार हुनुपर्दछ, बल र राम्रो पहिलो सम्पर्कको साथ प्लेसरहरू र प्लेयरहरूको लागि। र पक्कै पनि, उनीहरूसँग धेरै उज्ज्वल व्यक्तित्वहरू छन्।
डेभिड डे गेरोले म्यानचेस्टर युनाइटेडका लागि पीटर साचहेचको म्याच दोहोर्याउन तयार छन्। पहिले उसलाई हेर्दै र अब उनीसँग काम गर्दै, तपाईंले यो स्तरको गोलकीपरमा उभिनुहुनेछ? उहाँ क्लबमा नौ वर्षको उमेर भएको छ, आधुनिक फुटबल त्यस्तो वफादारी विरलै छ। तपाइँ यसको बारेमा के सोच्नुहुन्छ?
ज्याक ग्र्यालिश एक शानदार खेलाडी देखिन्थ्यो जब तपाईंको क्लबहरू पुरानो ट्राफर्डमा भेट्छन्। के ऊ तपाईंलाई फेरि एक प्रमुख खतरा हुनेछ? र तिनीहरूलाई कति धेरै प्रभावित छन्, उनले विचार गर्दा उनले हालसालै ठूलो प्राप्त गरे?
<< p> हो, हाम्रो अन्तिम खेलमा, उसले हामीलाई वास्तवमै केही समस्या निम्त्यायो। ऊ सहि छ, र एल गाजा देब्रेतिर। ग्रलिशले एक महान लक्ष्य गोल गरे र त्यहाँ पहिले नै धेरै कुरा छन्, त्यसैले हामी उहाँसित डराउनुपर्दैन। ऊ जहाँ बजायो - बाँयामा, केन्द्रमा वा दायाँ, उसले सधैं विपक्षीका खेलाडीहरूलाई स to तुल्याउँछ र यसको साझेदारहरूको लागि ठाउँ मुक्त गर्दछ। तर ग्रलिसले मात्र फुटबल खेलाडी "विल" होइन, तिनीहरूसँग धेरै राम्रा खेलाडीहरू छन्।
स्कट मैकले आफूलाई क्वायरेन्टिनको अगाडि प्रकट गरेको छ। अब, जब नोमा मतिमा आफ्नो करारमा विस्तार हुन्छ, मकोटमिलिसले ऊबाट के सिक्न सक्छ?
हिजोको खेलहरूको नतीजाहरू दिइयो, यदि तपाईंले आफ्ना सबै बाँकी बैठकहरू जित्नुभयो भने, तपाईं पहिलो चारमा जानुहुनेछ। के तपाइँ सोच्नुहुन्छ कि तपाईले वास्तवमै अधिकतम विजय लिनु पर्छ?
हो, यो धेरै सम्भव छ। तपाईंलाई के हुन्छ थाहा हुँदैन, तर यस्तो देखिन्छ। टेबलमा वरपरका टोलीहरू अब राम्रो फुटबल देखाउँदैछन्। हामी केवल प्रत्येक अर्को खेलमा केन्द्रित हुनेछौं। यदि हामीले ती सबैलाई जित्छौं भने हामी चौथोमा गिर हुनेछौं। हामी कसैको सहयोगमा भर पर्न सक्दैनौं, हामीले आफैंलाई गर्नुपर्दछ। यसले हामीलाई टोलीको रूपमा बढ्न मद्दत गर्दछ, र बुझ्दछ कि यस मौसममा हामी टेबलमा हामी माथि भएका क्लबहरूलाई चुनौती दिन सक्नेछौं।
नेथन अकेसँग तपाईंको कुराकानीको रेकर्ड एक लोकप्रिय रेकर्डिंग भएको छ। के यसको मतलब यो हो कि तपाईंलाई वास्तवमै बाँया-लेग गरिएको केन्द्रीय डिफेन्डर चाहिन्छ?
<< p> मेरो टोलीमा मसँग सात केन्द्रीय सेवकहरू छन्, त्यसैले यी कुराकानीहरू कहाँबाट आउँदछन्। यस सम्बन्धमा, हामी ठीकै छौं।
के तपाईंलाई लाग्छ ब्रुनी फर्नांदोले टीममेटलाई अझ राम्रो बनाउँदछ? यदि होईन भने, हुनसक्छ उसले उनीहरूलाई अझ बढी भरोसा दिन्छ, विशेष गरी जब बल प्राप्त हुन्छ?
मलाई लाग्छ यो दुई-मार्ग प्रक्रिया हो। ब्रुना क्लबमा आए र निश्चित गरे कि हामीसँग धेरै खेलाडीहरू छन्। फेरि, हामीले उसलाई हाम्रो क्षमता प्रकट गर्न मद्दत ग .्यौं। मलाई लाग्छ यो केवल एक राम्रो घनिष्ठ सम्बन्ध हो, उसले देख्दछ कि हामी उसलाई प्रगति गर्न सक्षम छौं। तर, अवश्य पनि, शौनाको आगमनले सबैलाई थप आवेग प्रदान गर्यो, र जब उसले नयाँ टोलीमा उत्कृष्ट सुरूवात देखाउँदछ।
बलले यसलाई प्राप्त गर्दा तपाईंको आन्तरिक कामहरू राम्रोसँग काम गर्दछ भन्ने कुरा विचार गर्नुहोस्, के तपाईंलाई लाग्छ कि तपाईंले पछिल्लो गर्मीलाई धर्मी ठहराएको महसुस गर्नुहुन्छ? उदाहरण को लागी, तपाईलाई उच्चारण गरिएको थियो कि तपाई कुनै उच्चारण नगरी "नौ" बिना नै छोडियो। तपाईको पूर्वको प्रशिक्षक सर एलेक्स, अलोपिंग समाधान लिन डराउँदैन ...
ठीक, यो पक्कै लोकप्रियता प्रतियोगिता होइन। मैले निर्णय लिनु पर्छ कि मलाई लाग्छ, क्लबलाई फाइदा हुन्छ। यी राम्रा र जनवरीमा गरेका निर्णयहरू थिए जुन हामीले गर्मीमा गरेका थियौं, किन्न र त्यहाँ धेरै खेलाडीहरू। मेरो टाउकोमा, तिनीहरू जहिले पनि टोलीको फाइदाको लागि लक्षित थिए, साथै युवा मानिसहरूलाई आकर्षित गर्न र अन्य खेलाडीहरूमा विश्वास प्रकट गर्ने। त्यसोभए, यदि म or वा 12 महिना अघि फर्कें भने, मैले फेरि त्यस्तै गरें।
म्याचचेस्टर युनाइटेड टीम (म्यानचेस्टर) र एस्टल्याण्डम टोली (बील्याण्डहम) फुटबल टूर्नामेन्ट भित्र हुनेछ: म्याच अफ इ England0202021 को च्याम्पियनशिप हो ।
टोली बीचको अघिल्लो सम्बन्ध म्यानचेस्टरको पक्षमा विजयको अन्त्य भयो, जबकि टोली अलेटले पराजयसँगै रहेको छ। झडप "म्यानचेस्टर युनाइटेड" र अघिल्लो फुटबल खेलमा 01. 1। 021 निम्न परिणामको साथ समाप्त भयो: 2: 1 मालिकको पक्षमा।
विजय जित्न, टीम ओले गननर सिलचर र डी स्मिथले मैदानमा आक्रमण र सुरक्षामा रणनीति संशोधन गरे।
अनलाइन प्रसारण मिलान "म्यानचेस्टर युनाइटेड" - अमर गाउँ 1V संसाधनहरू वा च्यानल अनलाइनमा नि: शुल्क हो, विशेष चैम्पियनशिप प्रसारणमा। इ England ्ल्यान्डको। मिलान प्रसारण "म्यानचेस्टर युनाइटेड" - अमर गाउँ, खेलको पाठ्यक्रम, परिणाम र मोबाइल प्लेटफर्महरू, एप्पल र एन्ड्रोइडबाट अवलोकन गर्न सकिन्छ।
शीर्षक: "म्यानचेस्टर संयुक्त" (म्यानचेस्टर) "म्यानचेस्टर संयुक्त" (म्यानचेस्टर): 1 187878STREND: यूएल-गन-गन-गन-गन-गन-गन-गन-गन-गनन
विगत म्यान "म्यानचेस्टर युनाइट" लेस्टास्टर शहरको बिरूद्ध खेलेको थियो - 21. 021, इ England ्ल्यान्डको ढाँचामा, ए England ्ल्यान्ड 20202021 को कप समाप्त भयो शहर।
का शैलीमा फुलहल टीमको बिरूद्ध प्ले गरिएको थियो - 0. 04। 02. 021, इ England ्ल्यान्ड 2020/2021 को भागको साथ र अखिल ग्वा टीमको जीतका साथ।
सँगसँगै "म्यानचेस्टर युनिभ" खेलको परिणामहरू अनुसरण गर्नुहोस् - प्रत्यक्ष फुटबल मोडमा सबै तथ्या .्क डेटा हाम्रो वेबसाइटमा खेलमा अपडेट हुन्छन्।